Mashiinka laser fiber
Mashiinka goynta fiber leber
Qalabka tuubbooyinka tuubbada ee mashiinka gooya
Mashiinka calaamadinta fiber leber
Mashiinka CNC Router Machine
Marmar CNC router
Alwaaxa CNC router
Birta CNC router
Mashiinka laser-ka CO2
Mashiinka jarista iyo Qalabka Mashiinka ee loo yaqaan 'CO2 Laser Jarida iyo Mashiinka Mashiinka
Mashiinka goynta loo yaqaan 'Laser-Non Metal CO2 Laser Cut Machine
Mashiinka Calaamadeynta ee loo yaqaan "CO2 Laser machine"
Plasma Jarida Machine
Sidee loo doortaa Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC?
1. Mashiinka xardha xayeysiinta: sheyga xardhadu waa shey yara jilicsan, sidaa awgeeda dunmiiqa mashiinka xardho xayeysiinta wuxuu ku dhex jiri karaa 1.5kw-3.0kw. Haddii aad sidan ku doorato, waad ku guuleysan kartaa ujeeddada xardhashada iyo kaydinta kharashyada. 2. Mashiinka xardha alwaaxa: Wareegtada ...Sii akhriso »
Sax iyadoo la adeegsanayo habka mashiinka xardho dhagaxa
Waqtiga dhejinta: Sep-02-2020
(1) Jawiga Shaqada Mashiinka xardha dhagaxu waa aalad farsamada sare ee mechatronics, oo leh shuruudo gaar ah oo loogu talagalay deegaanka shaqada. ...Sii akhriso »
Sidee loo doortaa Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC? Tilmaamaha Isticmaalayaasha Qalabka Mashiinka Xardho Dhagaxa
Waqtiga boostada: Sep-01-2020
Stone CNC router Mashiinka Mashiinka Mashiinka loo adeegsado hagaha isticmaalaha: 1. Goynta acrylic ee mashiinka xardho dhagaxa, hal-gees leh oo axdi qarameedka axdi qarameedka ah ayaa lagula talinayaa. Waxaa lagu gartaa habsami u socodsiinta qiiq la'aanta iyo urta, xawaaraha dhakhsaha leh, waxtarka sarreeya, ee aan dheg-dheg lahayn, run ahaantii deegaanka u habboon, iyo xawaaraheeda ...Sii akhriso »
Dagaal, waan guuleysan doonnaa!
Waqtiga boostada: Mar-03-2020
Laga bilaabo Janaayo 2020, cudur faafa oo loo yaqaan "Novel Coronavirus Infection Outbreak Pneumonia" ayaa ka dhacay Wuhan, China. Cudurka faafa wuxuu taabtay quluubta dadka adduunka oo dhan, wajiga hore ee cudurka faafa, dadka Shiineeska ah ee kor iyo hoosba u jooga dalka, ayaa si firfircoon ula dagaallamaya ...Sii akhriso »
27, Luulyo, 2019, macaamiisha Hindida ayaa u yimi warshaddeenna
Waqtiga boostada: Jul-30-2019
27, Luulyo, 2019, waa maalin kuleyl ah halkan Jinan China, macaamiisha Hindida waxay u yimaadaan inay soo booqdaan warshadeena, waad salaaman tihiin dhamaan asxaabteena. Saaxiibbada Hindiya waxay booqdeen waaxda soosaarka mashiinka CNC router routerka qiyaastii 3 saacadood, ka dib waxay booqdeen waaxdayada wax soosaarka mashiinka wax soosaarka ee CO2 ka dib booqashadii ...Sii akhriso »
Waa maxay mashiinka routerka CNC?
Waqtiga boostada: May-28-2019
CNC ROUTER Qalabka kumbuyuutar ee korantada (CNC) router waa kumbuyuutar lagu xakameeyo kombiyuutarka iyo mashiinka goynta ee la xiriira qalabka router-ka gacanta ku haya ee loo adeegsado jaridda agabyo adag, sida alwaaxa, waxyaabaha kujira, aluminiumka, birta, balaastigta, galaaska, iyo xumooyinka.  Rakaabka CNC waxay qaban karaan howlaha c ...Sii akhriso »
Ku raaxayso shaqada
Waqtiga boostada: May-21-2019
Shandong DADI CNC Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2014. Waa soo saare xirfadle ah CNC ROUTER iyo CNC LASER machine.Products waxaa si weyn looga isticmaalaa: warshadaha xayeysiinta, warshadaha alwaaxyada, warshadaha dhagaxa, warshadaha alaabta guryaha, warshadaha qurxinta darbiga aluminiumka warshadaha. iyo indhoo ...Sii akhriso »
Mushaharka in iibka ah ee mashiinka goynta laser dareenka
waqti Post: Aug-03-2018
Isticmaalka caalamiga ah ee mashiinka goynta laser keenay sahlanaato in warshadaha biraha. Haddii weli aad lumiso by badan oo ka mid ah mashiinada goynta laser, waxaad ku bixin kartaa fiiro gaar ah u dhibcahaas. 1. tayada goynta of goynta laser: sida qaar ka mid ah qalabka kushiinka, baabuurta, mashiinada, qalabka iyo kuwa kale ...Sii akhriso »
Waa maxay nooca decoration guriga Mashiinka goynta laser abuuri karaa?
habka xardho laser The ma aha oo kaliya ah "mindida" af badan in industry saarka ah, laakiin xitaa silsiladaha iyo farsamada in aynu aragno meel naga nolol maalmeedka aan la kala saari karaan xardho laser ah. Bal aynu eegno nooca dharka qoyska annagu waxaannu ku dhisi karo. Isticmaalka laser ...Sii akhriso »
Solution ee uumiga laser xagaaga
Wakhtigan, waa waqtiga oo ka mid ah muddo Meng Xia, marka onkod ay kordhisaa, roobka soo noqnoqda iyo jawi qoyan si fudud u keeni kartaa in uumiga ee laser ah, sidaas yareynta waxqabadka laser iyo dhaawac laga yaabaa. Sidee si ay u xalliyaan arrin ku uumiga laser? Maxaa s ...Sii akhriso »
Cinwaanka: Qolka 1102, North Rongsheng Times International Building 6, Quanfu overpass, Degmada Licheng, Jinan magaalada, gobolka ShanDong, Shiinaha
Telefoon: +86 15688488223
DADI CNC: Hambalyo .
DADI CNC: Hambalyo Miyaan ku caawin karaa?
Maya Mahadsanid Wadahadal Hada